Tuubbada Gudaha Qeybteeda Bannaanka (PICC): Daryeeliddeeda Guriga
Marka guriga lala aadayo Tuubbada Gudaha Qeybteeda Bannaanka ama leynka (PICC)
Waxa uu ilmahaagu guriga la aadayaa tuubbada gudaha qeybteeda bannaanka ama leynka (PICC) Waxaa lagu barayaa sida aad u isticmaaleyso iyo sida aad u daryeeleyso tuubbada, oo waa siyaabaha aad uga hortageyso infakshanka, biya-raacinta, xallinta dhibaatooyinka, iyo in aad tuubbada daawo ka siiso.
___ Xooggeeda lagu duri karo
___ Hal qeyb　Wax kale: ___________
___ Laba qeybood　Dhiig baarista ah ayaa laga qaadi　karaa　afka tuubbada:　Haa / Maya
Marka ilmahaagu soo bogsanayo oo uu joogi karo guriga, kalkaaliso ayaa ku bareysa ilaa aad isku filnaato sidaad u daryeeli doonto tuubbada afkeeda ama PICC ee ilmaha ka hor intaadan keligaa sameyn.
Waa wax aad u baahan tahay ka hor intaadan guriga la aadin ilmaha:
biya-raacinta gudaha ah ee leynka PICC
Tuubbada leynka PICC waxay u fiican tahay daryeelka ilmaha buka, laakiin waxaa jiri kara khatar ah infakshan marka ay bakteeriyo ku jirto tuubbada oo ay dabadeedna dhiigga raacdo. Xaaladdaas ayaa la yiraahdaa Infakshanka Tuubbada Xididka Dhiigga ama CLABSI. CLABSI waxay noqon kartaa halis khatar gelin karta nolosha.
Waxaa muhiim ah in aad ka hortagto infashanka, ama waxay noqoneysaa in tuubbada ama PICC laga saaro.Waxaa jira waxyaabo aad sameyn karto si aad uga hortagto infakshanka tuubbada leynka PICC.
Nadaafaddu waa khasab!
Si fiican ugu dhaqo gacmaha biyo iyo saabuun ama isticmaal aalkolada jeermiska ka hor intaadan taaban leynka PICC. Taas macnaheedu waa in aad dhaqdo gacmahaaga ka hor:
Biya-raacinta gudaha ah ee PICC, siinta daawada, iyo mar kasta oo aad taabaneyso leynka PICC.
Meelaha aad alaabta saaraneyso ku nadiifi jeermis-dile (sida Lysol® ama nooc kale) marka aad isu diyaarineyso daryeelidda tuubbada leynka PICC.
Dabool meesha leynka PICC oo ku xir bac ama maro aan biyuhu uga so gudbi karin inta uu ilmuhu qubeysanayo. Meesha leynka PICC waa in aysan qoyin ama aan biyo la dhexgelin. Haddii ay qoyan tahay faashadda muuqata, la xiriir kalkaalisada guriga si loo beddelo isla markiiba.
Biyo socda waa inaan loo dhigin leynka PICC oo yeysan biyuhu ku dhibcin, sababtoo ah jeermis biyaha la socda ayaa geli kara. Qubeyska baafka la dhex seexdo lama oggola.
Meelaha xafaayadda ka fogee leynka PICC marka aad ilmaha ka beddeleyso xafaayadda, oo ilmuhu yuusan afka gashan tuubbada.
Meesha lenka PICC waxaa lagu dabooli karaa oo lagu ilaalin karaa sharabaad nadiif ah oo laga duleeyey faraha.
Eeg meesha ay ku jirto leynka PICC oo ka eeg calaamadaha infakshanka (eeg Xallinta Dhibaatooyinka).
Inta uu ku jirto leynka PICC, uma fiicna dabaasha badda, harooyinka, webiyada, barkadaha iyo baaf biyo kulul. Waxaa jiray warbixin infakshan la arkay dabaal ka dib. Waxaa jirta mar ay shaqaalaha caafimaadka iyo kuwa daryeelka oggolaan karaan dabaasha, laakiin waa in iyaga keliya lagala hadlo. Haddii dabaasha loo oggolaado, leynka PICC waa in lagu daboolo wax kale oo ah maro biyaha ka celineysa oo daboolka waa in laga beddelo isla marka uu ilmuhu ka soo baxo biyaha.
Goorma ayaa la biya-raacinayaa leynka PICC?
Leynka PICC waa khasab in saliinge lagula shubo gudaha si uusan dhiig ugu xinjiroobin (ugu uruurin) oo uusan u xannibin. Haddii uu xirmo leynka, waxaa khasab ah in laga bixiyo.
Marka uu faleebbe ku xiran yahay leynka PICC, si joogto ah ayaa loo nadiifinayaa. Marka aan leynka la isticmaaleyn, waa in gudaha loo biyo raaciyo saddex mar:
Ka hor iyo ka dib marka daawo ama faleebbe laga siiyo.
Haddii culeyska ilmahaagu ka　sarreeyo　17 baawn, biya-raacinta gudaha ah waa in ay noqoto 12-kii saac mar.
Haddii culeyska ilmahaagu ka　hooseeyo　17 baawn, biya-raacinta gudaha ah waa in ay noqoto 8-dii saac mar.
Sidee baa loo biya-raacinayaa gudaha leyka PICC?
Mar kasta isticmaal saliinge ah 10mL ama ka weyn.　Saliingaha yar cadaadis badan ayuu ku sameyn karaa tuubbada xididka oo dillaac ayuu ku keeni karaa.
Ka hor　mar kasta　oo xididka laga biya-raacinayo gudaha ama daawo lagu shubayo leynka PICC, gasho gacmagelis nadiif ah oo daboolka infakshanka maro in yar oo ah CHG ilaa 30 ilbiriqsi. Ha qallasho 30 ilbiriqsi ilaa ay gebi ahaan qalleyl noqoto. Yaan la afuufin ama yaan marwaxad loo dhigin.
Mar kasta oo la sameynayo biya-raacinta gudaha ah, isticmaal habka ah "riix-oo-jooji": xoogaa ku shub dareeraha, ka dib ka jooji 1 ilaa 2 ilbiriqsi, ka dib ku sii shub xoogaa, jooji, waa uun sidaas. Habkan waxa uu nadiifinayaa gudaha xididka tuubbada.
Haddii ay adkaato in aad gudaha leynka PICC nadiifiso ama aad ka siiso daawada,　ha ku　khasbin biya-raacinta gudaha. La xiriir oo caawimaad ka codso dhakhtarka ama kalkaalisada.
Ku biya raaci dareeraha loogu tala galay.
Ku shub heparin, haddii loo qoray
Maqaska caagga ah ku qabo leynka PICC
Waxyaabaha aad sameyneyso
Diyaarso oo nadiifi goobta aad alaabta dhiganeyso
heparin (haddii loo qoray, 1 qeyb cabbirka gudaha)
Iska eeg dareeraha loogu talagalay iyo qoraalka saliingaha heparin ka hor intaadan ilmaha ku shubin.
Dareeraha loogu talagalay iyo saliingeyaasha heparin waxaa la isticmaali karo waa inta aysan dhicin. Iska tuur haddii ay daawadu salka joogto ama aysan kuula muuqan wax ah　nadiif. Haddii aad mid iska tuurto iska hubso in aad taleefan u dirto farmashiyaha si ay kuugu diyaariyaan daawada.
Daboolka cirbadda mari CHG ilaa 30 ilbiriqsi. Ha qallasho 30 ilbiriqsi ilaa ay gebi ahaan qalleyl noqoto.
Daboolka cirbadda mari CHG cusub ilaa 30 ilbiriqsi. Ha qallasho 30 ilbiriqsi ilaa ay gebi ahaan qalleyl noqoto.
Haddii uu leynka PICC leedahay laba qeybood, waxa aad sameyneyso qeybta labaad si gaar ah ugu samee 6 ilaa 13 ilbiriqsi. U isticmaal CHG cusub, dareeraha loogu talagalay iyo saliingeyaasha heparin qeyb kasta.
Saliingeyaasha la isticmaalo iyo alaabta ku tuur qashinka caadiga ah. Saliingeyaasha dhiigga leh ku tuur goobo gaar ah, sida dhalo adag oo leh dabool lagu xirayo. Ku dul qor inaan dib loo warshadeyn oo ay yihiin cirbado "Do Not Recycle - Household Sharps."
Aad ha u buuxin caagga cirbadaha qashinka. Qashinku waxa uu ku kala duwan yahay deegaanka lagu nool yahay. Deegaamada qaar ayaa leh goob lagu tuuro cirbadaha. Si aad isaga hubsato, weydii shirkadda qashinqubka, farmashiyaha, ama kilinig aad la xiriirto.
Sababta macquulka ah
Danqasho, guduudasho, ama malax meesha tuubbada
Gacanta oo bararsan
Dhib la xiriira nadiifinta gudaha leynka PICC
Ka fur maqaska caagga ah (haddii uu ku xiran yahay).
Daboolka cirbadda markuusan si fiican u xirneyn
Tuubbadu in ay duleesho
Dhuuji daboolka cirbadda.
Haddii ay biyo ka socdaan leynka, maqaska uga qabo dusha meesha ay biyuhu ka socdaan.
Taleefan u dir kalkaalisada, kilinigga, ama dhakhtarka.
CHG ku nadiifi ilaa 30 daqiiqo bartamaha oo ha kuu qallasho ka hor intaadan cirbadda gelin dabool cusub.
Kalkaalisada waa in ay beddesho faashadda, nooca sharootada ama nooca faashadda la isticmaalay.
Markuu leynka PICC iska soo dhaco
Sharooto ku qabo.
Wax ka qabo oo taleefan u dir dhakhtarka ama kalkaalisada.
Mar kasta sii qaado santuuqa leynka PICC ee sahayda degdegga ah meel kasta oo uu ilmahaagu aado. Iska eeg santuuqa ka hor intaadan guriga ka tegin oo si aad u diyaarsato ku darso wixii aad isticmaasho markaad soo noqoto. Sahayda waxaa ka mid ah:
sharootooyinka caadiga ah　(Band-Aids™)
Alaabada waxa aad ka dalabaneysaa shirkadaha qalabka daawada ama　farmashiyeyaasha guryaha u soo dira daawada. Dalabka ugu horreeya isbitaalka ama guriga ayaad ku heleysaa. Weydii kalkaalisada haddii aad haysato waxa aad u baahan tahay. Waxaa lagu siinayaa lambar taleefan aad garaacdo marka aad u baahato in aad dalbato alaabta.
Haddii aad ka qabto wax su'aalo ah, soo garaac:
Taleefanka kalkaalisada guriga　______________________________________________
Shirkadda alaabta　______________________________________________
Farmashiyaha daawada guriga　______________________________________________
Wakhtigii qoraalkan 6/2021